မဲညစ်နေတဲ့ ချိုင်းကြား၊ ပေါင်ခြံ၊ တံတောင်ဆစ်တွေကို အမြန်ဆုံးဖြူဝင်းသွားစေမယ့် နည်းလမ်းများ……. – Shwe Thoon 8 Online Media
မဲညစ်နေတဲ့ ချိုင်းကြား၊ ပေါင်ခြံ၊ တံတောင်ဆစ်တွေကို အမြန်ဆုံးဖြူဝင်းသွားစေမယ့် နည်းလမ်းများ…….
July 27, 2020 July 27, 2020 shwe0Comments
မဲညစ်နေတဲ့ ချိုင်းကြား၊ ပေါင်ခြံ၊ တံတောင်ဆစ်တွေကို အမြန်ဆုံးဖြူဝင်းသွားစေမယ့် နည်းလမ်းများ…
ပျိုမေတို့အနေနဲအတိုတွေ၊ လက်ပြတ်တွေဝတ်တဲ့အခါ ချိုင်းသားတွေ၊ ပေါင်ခြံတွေမဲနေရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုတွေ လျော့နည်းနေတတ်ပါတယ်။ tခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ ငွေကုန်ကြေးကျလည်း သက်သာတဲ့အပြင် လွယ်ကူရိုးရှင်းပြီး အိမ်မှာတင်ကိုယ်တိုင် လုပ်လို့ရတဲ့ နည်းလမ်;လေးတွေဖြစ်တာကြောင့် အားလုံးနဲ့လည်း အဆင်ပြေမှာပါနော် …။
လတ်ဆတ်တဲ့ရှားစောင်းလက်ပပ်အနှစ်ကိုယူပြီး မည်းနေတဲ့ တံတောင်ဆစ်၊ ဒူးခေါင်း နဲ့ ပေါင်ခြံတွေအပြင် တခြားမဲနေတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေအားလုံးကို လိမ်းပေးနိုင်ပါတယ်။ လိမ်းပေးပြီးတဲ့အခါမှာတော့ မိနစ် ၂၀ လောက်ထားပြီး ရေနွေးလေးနဲ့ ပြန်လည်ဆေးကြောပေးလိုက်ရုံပါပဲ။ ထူးခြားတဲ့ အာနိသင်ကို ချက်ချင်းတွေ့မြင်ရမှာပါ …။
ဒိန်ချဉ်အသန့်ကိုယူပြီး မည်းနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေကို လိမ်းပေးပြီး ၁၅ မိနစ်လောက်ထားလိုက်ပါ။ ပြီးရင်တော့ ရေနွေးလေးနဲ့ ဆေးကြောပေးလိုက် ရုံပါပဲ …။
လိမ္မော်ရည်နဲ့ စနွင်းမှုန့်အနည်းငယ်ကိုရောမွှေလိုက်ပါ။ ရလာတဲ့အနှစ်ကို မည်းနေတဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေမှာလိမ်းပြီး မိနစ် ၂၀ ခန့်ထားပြီးမှ ရေနွေးဖြင့်ဆေးကြောပေးပါ။ နေ့စဉ်ပုံမှန်ပြုလုပ်ပေးသွားရင် သိသာထင်ရှားတဲ့ ရလဒ်ကို ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ မြင်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် …။
ပဲမှုန့်ကို ရေအနည်းငယ်ရောပြီး ခပ်ပျစ်ပျစ်ဖျော်လိုက်ပါ။ ရလာတဲ့အနှစ်ကို မည်းနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေမှာ လိမ်းပြီး နာရီဝက်အကြာမှာရေနွေးလေးနဲ့ ဆေးကြောပေးလိုက်ပါ။ နေ့စဉ်ပုံမှန်ပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြင့် သိသာထင်ရှားတဲ့ရလဒ်ကို အမြန်ဆုံးရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်နော် …။ ။
မဲညစ်နေတဲ့ ချိုင်းကြား၊ ပေါင်ခြံ၊ တံတောင်ဆစ်တွေကို အမြန်ဆုံးဖြူဝင်းသွားစေမယ့် နည်းလမ်းများ…
ပျိုမေတို့အနေနဲအတိုတွေ၊ လက်ပြတ်တွေဝတ်တဲ့အခါ ချိုင်းသားတွေ၊ ပေါင်ခြံတွေမဲနေရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုတွေ လျော့နည်းနေတတ်ပါတယ်။ tခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ ငွေကုန်ကြေးကျလည်း သက်သာတဲ့အပြင် လွယ်ကူရိုးရှင်းပြီး အိမ်မှာတင်ကိုယ်တိုင် လုပ်လို့ရတဲ့ နည်းလမ်;လေးတွေဖြစ်တာကြောင့် အားလုံးနဲ့လည်း အဆင်ပြေမှာပါနော် …။
လတျဆတျတဲ့ရှားစောငျးလကျပပျအနှဈကိုယူပွီး မညျးနတေဲ့ တံတောငျဆဈ၊ ဒူးခေါငျး နဲ့ ပေါငျခွံတှအေပွငျ တခွားမဲနတေဲ့ ခန်ဓာကိုယျအစိတျအပိုငျးတှအေားလုံးကို လိမျးပေးနိုငျပါတယျ။ လိမျးပေးပွီးတဲ့အခါမှာတော့ မိနဈ ၂၀ လောကျထားပွီး ရနှေေးလေးနဲ့ ပွနျလညျဆေးကွောပေးလိုကျရုံပါပဲ။ ထူးခွားတဲ့ အာနိသငျကို ခကျြခငျြးတှမွေ့ငျရမှာပါ …။
ဒိနျခဉျြအသနျ့ကိုယူပွီး မညျးနတေဲ့ခန်ဓာကိုယျအစိတျအပျိုငျးတှကေို လိမျးပေးပွီး ၁၅ မိနဈလောကျထားလိုကျပါ။ ပွီးရငျတော့ ရနှေေးလေးနဲ့ ဆေးကွောပေးလိုကျ ရုံပါပဲ …။
လိမ်မျောရညျနဲ့ စနှငျးမှုနျ့အနညျးငယျကိုရောမှလေိုကျပါ။ ရလာတဲ့အနှဈကို မညျးနတေဲ့အစိတျအပိုငျးတှမှောလိမျးပွီး မိနဈ ၂၀ ခနျ့ထားပွီးမှ ရနှေေးဖွငျ့ဆေးကွောပေးပါ။ နစေ့ဉျပုံမှနျပွုလုပျပေးသှားရငျ သိသာထငျရှားတဲ့ ရလဒျကို ရကျပိုငျးအတှငျးမှာ မွငျတှရေ့မှာပဲဖွဈပါတယျ …။
ပဲမှုနျ့ကို ရအေနညျးငယျရောပွီး ခပျပဈြပဈြဖြျောလိုကျပါ။ ရလာတဲ့အနှဈကို မညျးနတေဲ့ခန်ဓာကိုယျအစိတျအပိုငျးတှမှော လိမျးပွီး နာရီဝကျအကွာမှာရနှေေးလေးနဲ့ ဆေးကွောပေးလိုကျပါ။ နစေ့ဉျပုံမှနျပွုလုပျပေးခွငျးဖွငျ့ သိသာထငျရှားတဲ့ရလဒျကို အမွနျဆုံးရရှိမှာ ဖွဈပါတယျနျော …။ ။
← ငှက်ပျောအမြုတေပါ သင်ကံကောင်းပါပြီ ရှဲခဲ့ပြီးငွေဝင်တာတွေကိုသာ ခက်ခံလိုက်ပါနော် ….
…တက္ကသိုလ် ဝင်တန်း အောင်စာရင်း ထွက်မည့် အချိန် ကို ညွှန်ချုပ် ကြေငြာပြီ….. →